ဟိုဌာနလွှဲ၊ ဒီရုံးလွှဲ ဘော်လီဘောပုတ်နေကြတယ် – Nyang Media
COVID – 19 ကပ်ရောဂါအကြပ်အတည်းကြောင့် အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသော အလုပ်သမား (၃၀၀) အရေးဆောင်ရွက်နေသော လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် မြန်မာယူနီဗျူးစက်ရုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ကိုထက်လှိုင်ဖြိုးကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားသည်။
Ye Naung / မြန်မာယူနီဗျူးစက်ရုံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ကိုထက်လှိုင်ဖြိုး
ငြမ်းမီဒီယာ – အလုပ်သမား (၃၀၀) ကျော်အလုပ်ထုတ် ခံရတဲ့ကိစ္စကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပြပေးပါဦး။
KHHP – (၂၂ . ၅ . ၂၀၂၀) နေ့မှာ စက်ရုံ ပြန်လည်ပတ်မယ်ဆိုပြီး အသိပေးစာ ကပ်ထားတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ကျနော် တို့ အလုပ်သမား တွေ အလုပ်ဆင်းဖို့ လာတော့ ဝန်ထမ်း (၃၅၅) ယောက်ကို COVID – 19 ကြောင့် ဝန်ထမ်းဦးရေ လျော့ချတဲ့ အနေနဲ့ အလုပ်ကထုတ်ထားတဲ့အကြောင်း ကြေညာထားတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်ပြန်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ နယ်အသီးသီး က ပြန်လာကြတာ။ ဆိုတော့ သူတို့က အလုပ် ထုတ် နစ်နာကြေးကို လက်မခံကြဘူး။ ပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေက အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဆီကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ ဆက်လုပ်ကြတာပါ။
စက်ရုံတွေဝန်ထမ်း လျော့တာကြည့်လိုက်ရင် သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အလုပ်သမားတွေကိုပဲ လျော့နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာလည်း …
ငြမ်းမီဒီယာ – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO ကိုလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ် တိုင်ကြားထားတယ်လို့ သိရ တော့ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးကို မျှော်လင့် ထားပါသလဲ။
KHKP – ကျနော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့ ကျနော်တို့ဆီ က အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေ အကျပ်အတည်း တွေကို နိုင်ငံတကာက အလုပ်သမား အရေးဆောင်ရွက်သူတွေ တိတိကျကျသိမြင်ပြီး အဲဒီအခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရပ်တည်ထောက်ခံမှု တစ်ခုခုရှိလာနိုင်စေဖို့ပါ။
ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေအပေါ် တစ်ဖက်သတ်ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါအချက်တွေကို အလုပ်ရှင်ဘက်က ချိုးဖောက်ဖိနှိပ်မှုတွေကို ကမ္ဘာတဝန်းက အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်ကြသူတွေ သိစေဖို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်သမားတွေကို အခုလို အလုပ်ရှင်ဘက်က တစ်ဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ အလုပ်က ထုတ်ပယ်တဲ့ ကိစ္စမှာ အမှန်တရားတစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေချင်တာပါ။ အခု ဒီလှိုင်သာယာကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးတွေကို ဒီကိစ္စအတွက် ကျနော်တို့သွားရောက် တိုင်ကြားတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဌာနလွှဲ၊ ဒီရုံးလွှဲ စသဖြင့်ဘော်လီဘော ပုတ်နေ ကြတယ်။
သမဂ္ဂတွေကို အခွင့်သာတာနဲ့ ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ သမဂ္ဂတွေရှိရင် သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ထင်ရာစိုင်းလို့မရဘူး။ ဒီလိုတွေးနေကြတာ …
သူတို့အဲဒီလို ဟိုလွှဲဒီလွှဲလုပ်နေကြတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း မျိုးစုံကို တစ်ဖက် မှာရင်ဆိုင်နေကြရပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုရနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက် ကြတာပါ။
→ အလုပ်သမား တွေအတွက် တရားမျှတမှု ရှိရဲ့လား
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုကိစ္စမှာ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာက အလုပ်ရှင်ကိုတရားစွဲဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်အခြေအနေထိရောက်နေပြီလဲ။
KHHP – ပြီးခဲ့တဲ့ ကြသပဒေးနေ့က ကျနော်တို့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသဘောတူ စာချုပ်ပါအချက်တွေကို စစ်ဆေးပြီး အလုပ်ရှင် ဘက်က ချိုးဖောက်တဲ့အချက်တွေရှိလို့ အလုပ် သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဦးစီးအရာရှိက အမြန်ဆုံးတရားစွဲဆို ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျနော်တို့ကိုပြောထားတာပါ။
အဓိကကတော့ ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာ စာချုပ်အရ အဆောင်နေ ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆုံး အမှုရင်ဆိုင်ဆဲ ကာလမှာ တောင် အဆောင်ကိုနေခွင့်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှင်ဘက်က “ ငါတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ်၊ အလုပ်ထုတ်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အဆောင်မှာပေးမနေ ဘူး” ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတာပေါ့။
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျနော်တို့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသာ သူသိရင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် …
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားပြဿနာတွေဟာ အခုမှမဟုတ်ဘူး၊ စက်မှုဇုန်တွေစက်ရုံတွေနဲ့အတူ ပေါ်လာခဲ့တာ ခုထိလည်း ဒီအတွက်အကောင်းဆုံး အဖြေတစ်ခု မရနိုင်သေးဘူး။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် နောက်လည်းဒီပြဿနာတွေကရှိနေဦးမှာပဲ။ ဆိုတော့ ဒီလိုအလုပ်သမားပြဿနာတွေဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လို့ယူဆပါသလဲ။
KHHP – အဓိကကတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားမှာ မျှတတဲ့အခြေအနေတစ်ခု ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ တိကျထိရောက်တဲ့ ဥပဒေတွေလိုအပ်နေလို့ပါ။ နောက်တစ်ချက် က ရှိပြီးသားဥပဒေတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင် မှုအားနည်းတာပေါ့။ ပြီးတော့ အခုဆို ဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အလုပ်သမားကိုယ်စားပြု အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေရှိတယ်။
ဒီသမဂ္ဂတွေအပေါ် အလုပ်ရှင်တွေက မှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်နိုင်ကြဘူး။ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေကို သူတို့က သူတို့ အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးမယ့် ရန်သူလိုသဘောထားကြတယ်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်ကြဘူး။ တကယ်တော့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ ဆိုတာ အလုပ်သမားဘက်ကချည်း မှားမှားမှန်မှန် တစ်ဖက်သတ် ရပ်တည်ပြီး အလုပ်ရှင်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ဖွဲ့ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သမားတွေရဲ့အကျိုးကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာ အလုပ်ရှင်ကိုပြဿနာရှာတာ မဟုတ်ဘူး။
ဥပဒေအရပေးထားတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးတာပါ။ ဥပဒေနဲ့ အညီရတဲ့ အခွင့်အရေးကိုရတော့ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်တယ်။ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ခြင်းကြောင့် ကုန်ထုတ် စွမ်းအား တက်လာတယ်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတက်လာတော့ အလုပ်ရှင်အတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့။
အဲဒီ သဘောကို အလုပ်ရှင်တွေက သဲသဲကွဲကွဲမဖြစ်ဘူး။ မဖြစ်တော့ သမဂ္ဂတွေအပေါ် တန်ဖိုးထားမှုမရှိသလို သမဂ္ဂတွေကို အခွင့်သာတာနဲ့ ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားကြ တယ်။ သမဂ္ဂတွေရှိရင် သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ထင်ရာစိုင်းလို့မရဘူး။ ဒီလိုတွေးနေကြတာ။ တကယ်တော့ အလုပ်ရှင်က လုပ်ချင် တာလုပ်၊ ဖိနှိပ်ချင်သလိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဟာ ဘယ်လိုမှ ကုန်ထုတ်စွမ်းရည် မြင့်မားလာစရာမရှိဘူး။
အကျပ် အတည်းကာလမို့ လုပ်သားအင်အားလျော့ချရင်လည်း ဥပဒေပါ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီ တိတိကျကျ လုပ်ပါ။ အဲဒီလိုလျော့ချတဲ့အခါမှာ …
ထွက်ပေါက်မရှိ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ လုပ်သားနည်းနည်းပါးပါးလောက်နဲ့ သူလည်ပတ်ရမှာပဲ။ ရွေးချယ် စရာ အခွင့်အရေးပေါ် တာနဲ့ လုပ်သားတွေ သူ့လုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာသွားမှာ။ ဥပဒေအရ ရသင့်ရထိုက် တာတွေကို မပေးဘဲဖိနှိပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘယ်အလုပ်သမားမှမမြဲဘူး။ ဒါပါပဲ။
Ye Naung / အလုပ်သမားများ
ငြမ်းမီဒီယာ – အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားသမဂ္ဂကိုဖြိုခွဲချင်လို့ အခုလိုအလုပ်သမား (၃၀၀) ကျော်ကို အလုပ်ကရပ် နားလိုက်တာလို့ ကိုထက်လှိုင်ဖြိုး ပြောထားတာကို သတင်းတစ်ခုမှာ တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုကောက်ချက်ချနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုခိုင်လုံတဲ့ အချက်အလက် တွေရှိသလဲ။
KHHP – ကျနော်တို့စက်ရုံမှာ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အလုပ်သမားတွေရော၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် မဟုတ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေရော ရှိတဲ့ အထဲက အခုလူလျော့တယ်ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အလုပ်သမား (၃၅၅) ယောက်လုံးဟာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် တွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာလေ။ ဒီထက်ခိုင်လုံတဲ့အချက်အလက်ရှိဦးမလား။ ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ ဒီ လုပ်ရပ် ဟာ ‘မပြေးသော်လည်းကန်ရာရှိ’ ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့။
→ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မတွေ့ရတာပဲ
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် အခုလို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေမှုတွေဟာ နောက်ဆုံး အဆင့်မှာ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
KHHP – အခုဖြစ်တာက အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားကြားချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်ကို ဖောက်ဖျက်တာပေါ့ဗျာ။ ဆိုတော့ ဒီစာချုပ်ဆိုတာလည်း အစိုးရဝန်ကြီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးတွေမှာ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ ချုပ်ဆို ထားတဲ့ စာချုပ်တွေပါ။
အခုအလုပ်ရှင်ဘက်က စာချုပ်ပါအချက်အလက်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီ။ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘာလုပ်မလဲ။ ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေ ဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ သိရှိအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ တင်ပြထားပြီးပြီ။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးမဏ္ဍိုင် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဥပဒေ ပြုရေးမဏ္ဍိုင်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်က ပြဌာန်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက် က တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်ကဘယ်လောက်ထိ လေးစားလိုက်နာမှု ရှိသလဲဆိုတာ အဖြေတစ်ခု ထွက်လာ လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြို့နယ်အဆင့် အလုပ်သမားရုံးတွေက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ နိုင်ငံတော်ကပြဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ ကို တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ လေးစားလိုက်နာပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သလဲ၊ အဂတိ ဘယ်လောက် ကင်းသလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိရလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့် ထားပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဆိုတော့ အလုပ်ကရပ်နားခံရတဲ့ အလုပ် သမား (၃၀၀) ကျော်အတွက် အခုလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများလဲ။ ဆိုလိုတာက အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ပြန်လည်ရရှိရေးလား၊ အလုပ်ရှင်ရဲ့ စာချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စေချင်တာလား။
KHHP – အလုပ်သမားတွေအတွက်ကတော့ အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးဆိုတာထက် အလုပ် လုပ်ခွင့်ရရေးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်သမားတစ်ယောက် တစ်လအလုပ်မရှိရင် နေထိုင်ရပ်တည်ရေးအတွက် အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ အလုပ်ထုတ် နစ်နာကြေး ငွေသိန်းဂဏန်းဆိုတာက အလုပ်သမားတစ်ယောက်အတွက် ရေရှည်ကိုထည့်စဉ်းစားရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ် လုပ်နေရတာလောက် ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဗျ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့က အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရေးကိုပဲ ပိုဦးတည်ပါတယ်။
အခုကျနော်တို့ ပြောနေတာက အကျပ် အတည်းကာလမို့ လုပ်သားအင်အားလျော့ချရင်လည်း ဥပဒေပါ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီ တိတိကျကျ လုပ်ပါ။ အဲဒီလိုလျော့ချတဲ့အခါမှာလည်း နောင် လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန် အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်ရှိလာလို့ အလုပ်ခန့် ရတော့မယ်ဆိုရင် လျော့ချထားတုန်းက အလုပ်သမားတွေကို ဦးစားပေး ပြန်ခန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။
ဒါတွေကို ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်း အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ပြောနေတာ။ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆိုတာ ‘ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်း မှီ’ ပါပဲ။ အလုပ်ရှင်အဆင်ပြေမှ အလုပ်သမားတွေအဆင်ပြေမယ်၊အလုပ်သမားတွေ အဆင်ပြေမှလည်း အလုပ်ရှင် အတွက် အဆင် ပြေမယ်။ ဒီသဘာဝကို ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်။
→ အလုပ်သမားတွေက COVID -19 စိန်ခေါ်မှုထဲမှာ ပိတ် မိသလိုဖြစ်သွားတာ
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်ကြရင်း နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် အခုလို အခက်အခဲတွေ ကြုံရတဲ့အခြေအနေကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆီ သတင်းစကား ပါးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးပါးချင်ပါသလဲ။
KHHP – နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျနော်တို့ အလုပ်သမား တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသာ သူသိရင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ညွှန်ကြားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို အထက်က တာဝန်ရှိသူတွေ အမှန်အတိုင်း သိပါ့မလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။
သိရှိလို့ မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ ကို မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်း ပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းပါတယ်။
→ ဒီကိစ္စကို တည်ဆဲအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာ
KHHP – အခု စက်မှုဇုန်အသီးသီးက စက်ရုံတွေဝန်ထမ်း လျော့တာကြည့်လိုက်ရင် သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အလုပ်သမားတွေကိုပဲ လျော့နေ သလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာလည်း ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူး။အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ အလုပ် သမား သမဂ္ဂတွေအပေါ် တန်ဖိုးမထားမှု၊ နားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့လုပ်ကြတဲ့ ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကို ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားဆိုတာ ရန်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ မိတ်ဖက်တွေပါ။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းက နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
→ အလုပ်သမားတွေဟာ ရောဂါကပ်ဘေးထက် မငတ်ရေးကိုပိုဦးစားပေးနေရတယ်
Tags: စက်မှုဇုန်, သမဂ္ဂ, အစိုးရ, အလုပ်သမား, ဥပဒေ